Zoma(Mk. 6, 14-29) - 04/02/2022 | FKMP
Zoma(Mk. 6, 14-29) – 04/02/2022
« Tamin’izany andro izany: Nahare ny lazan’i Jesoa i Herôda ka hoy ny sasany hoe: “I Joany Batista nitsangan-ko velona izay, ka izany no iasan’ireo hery mahagaga aminy”; fa ny sasany kosa nanao hoe: “I Elia izay”, ary ny hafa indray dia hoe: “Mpaminany izay, dia toy ny iray amin’ny mpaminany.” Ary nony nandre izany i Herôda, dia nanao hoe: “I Joany izay e, dia ilay efa notapahiko ny lohany, fa efa nitsangan-ko velona izy.” Fa i Herôda io ihany no naniraka hisambotra sy hamatotra an’i Joany tany an-tranomaizina, noho ny amin’i Herôdiada vadin’i Filipo rahalahiny izay nalainy ho vady. Satria i Joany nanao taminy hoe: “Tsy mahazo manambady ny vadin-drahalahinao ianao.” Koa tonga halan’i Herôdiada izy sy nirìny ho faty aza, saingy, tsy azony natao izany noho ny tahotr’i Herôda an’i Joany, izay hitany fa lehilahy marina sy masina, ka narovany sady narahiny hevitra tamin’ny zavatra maro, sy nohenoiny tamin-kafaliana. Ary tonga ny andro tsara, dia ilay fitsingerenan’ny taona nahaterahan’i Herôda ka nanaovany fanasana ho an’ny manamboninahiny sy ny tompon’arivo ary ny loholona tany Galilea. Fa niditra nandihy tao an-trano fanasana ny zanakavavin’i Herôdiada ka nahafaly an’i Herôda, sy izay niara-nihinana taminy; dia hoy ny mpanjaka tamin-drazazavavy: “Angataho amiko izay tianao, fa homeko anao”, sady nampiany tamim-pianianana hoe: “Na inona na inona angatahinao amiko, dia homeko anao, na dia ny antsasaky ny fanjakako aza.” Dia nivoaka razazavavy ka nanontany an-dreniny hoe: “Inona no angatahiko?” Ary hoy reniny: “Ny lohan’i Joany Batista.” Dia nidodododo faingana nankao amin’ny mpanjaka izy, ka nangataka hoe: “Tiako raha omenao ahy an-dovia izao ankehitriny izao ny lohan’i Joany Batista.” Nalahelo ny mpanjaka, kanefa noho ny fianianany sy noho ireo olona niara-nihinana taminy, dia tsy sahy nandà an-drazazavavy izy, fa nirahiny faingana ny mpiambina anankiray nasainy hitondra ny lohan’i Joany amin’ny lovia. Dia nandeha nanapaka ny lohan’i Joany tao an-tranomaizina ilay mpiambina, ka nitondra azy tamin’ny lovia, ary nomeny an-drazazavavy dia nomen-drazazavavy an-dreniny kosa. Nony nandre izany ny mpianany, dia tonga naka ny fatiny ka nandevina azy. »
Ny Evanjely anio dia manambara amintsika fa na dia manana safidy malalaka aza isika, dia eo foana ny Tompo mampatsiahy antsika fa misy làlana tsy azontsika hialàna ary tsy maintsy hizorana, na dia tsy araka ny heritreritsika olombelona aza.
Mivavaha mba ho eo amintsika mandrakariva ny Fanahy Masina amin »ny fanapahan-kevitra sy ny safidy raisintsika isan’ andro, mba ahafahantsika hiaina hatrany sy hitory ny Vaovao Mahafaly. Tsy adinoantsika ihany koa ny mivavaka ho an’ ny Nosintsika izay andalovan’ny rivo-doza ankehitriny.
Tompo o, hampatsiahivo aminay lalandava fa Ianao ihany no Làlana sy Fahamarinana ary Fiainana.
Previous Post: Alakamisy 4D (Mk 6, 7-13) – 03/02/2022
Next Post: Sabotsy 4D (Mk 6, 30-34) – 05/02/2022